Ogaden News Agency (ONA) – Faah-faahin ku Saabsan $22 Milyan oo Imaaraatku Muqdisho Keenay.
Faah-faahin ku Saabsan $22 Milyan oo Imaaraatku Muqdisho Keenay.
Diyaarad laga lee yahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa Muqdisho keentey lacag badan oo Dollar ah. Diyaaradda ayaa ka soo duushey magaalada Abu-Dhabi ee dalka Isutagga Imaaraadka Carabta. Qaar kamid ah saraakiisha garoonka diyaaradaha iyo shaqaalaha diyaaradda watey oo ahaa Diblomaasiyiin iyo saraakiil Imaaraad ah ayaa is faham waa dhex marey, waxaana Imaraadku sheegeen in lacagtan ay leedahay Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Dowladda Puntland ee Federaalka ka tirsan.
Qaar kamid ah saraakiisha Garoonka diyaaradaha ee Adan Cadde ayaa markiiba warbaahinta si hoose warka u siiyey, waxaana si weyn loogu faafiyey baraha bulshada iyada oo wararka la faafinayaa ay ahaayeen kuwo xaqiiqda ka fog.
Diyaaradan ayaa nooceedu yahay Boeing waxaana la yiraahdaa Royal Jet Flight lanbarkeeduna yahay R0j04. Lacagta ay sidey ayaa gaareysey $22 milyan oo dollarka Maraykanka, taas oo isugu jirta Mushahar iyo adeega Loojistikada muddo afar bilood ah, ciidamada ay u tababartey Dowladda Federaalka iyo ciidanka Badda ee Puntland.
Lacagtan ayaa lagu wareejiyey Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in warsaaxaafeed uu ka soo baxo Dowladda federaalka iyo Imaaraadka Carabta, lacagtan ayaa lagu wadaa in ay gaarto meelihii ay u socotey, mana jirto wax dhibaato ah oo ka taagan lacagta. Waxaana Imaaraadku sheegeen in ay kor u qaadeen taageerada ay ku bixinayeen amniga Soomaaliya.
Horay Dowladda Imaaraadku waxay lacagta ciidanka Badda ee Puntland uga dejin jirtey magaalada Boosaaso, ma cadda in sababta ay Muqdisho uga dejiyeen ay tahay heshiis ay wada gaareen iyaga iyo dowladda federaalka SOomaaliya. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa Puntland ka taageerta ciidanka PMPF ee la dhisay sanadkii 2010, sidoo kale waxay taageertaa in badan o kamid ah ciidanka Gaashaan ee Dowaldda federaalka Soomaaliya.